ဝိနည်းတော် ပညတ်ခြင်းအကြောင်း ၁၀ ချက်ပြင်ဆင်
(၁၀) ဝိနည်း (စည်းမျဉ်းဥပဒေ) ကို ချီးမြောက်ရန်။
၃. မာတုဂါမ၏ ရုပ်ပုံ၊ ဓာတ်ပုံ၊ ရုပ်ထု၊
အကပ်ခံအင်္ဂါ (၅) ပါးပြင်ဆင်
ကပ်အပ်သောပစ္စည်းနှင့် ထည့်ရာ တင်ရာဖြစ်သော သပိတ်၊ ပန်းကန်၊ ခွက်၊ စားပွဲခုံ စသော ဝတ္ထုသည် အားအလယ်အလတ် ရှိသော ယောကျာ်း မြှောက်ချီနိုင်သော ဝတ္ထုဖြစ်ခြင်း။
မပြောင်းမရွှေ့နိုင်သော ပျဉ်ချပ် ကျောက်ဖျာစသည်ဖြစ်စေ၊ သစ်ငုတ် သစ်ပင်စသည်နှင့် တွဲချည်ထားသောညောင်စောင်း၊ အင်းပျဉ်စသည်ဖြစ်စေ ဆက်ကပ်ရန်ပစ္စည်းကို တင်၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။ သစ်ပင်ဖြစ် (ပေါက်) နေ၍ မခူး ရသေးသော ပဒုမ္မာကြာရွက်၊ ပေါက်ရွက်၊ အင်ဖက် စသည် ထည့်၍ ကပ်လျှင်လည်း အကပ်မမြောက်။ ဆက်ကပ်မည့် ပစ္စည်းကို ဆောင်ယူ၍ မရနိုင်လောက်အောင် သေးငယ်သော မန်ကျည်းရွက်၊ သျှားရွက် စသည် ထည့်၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။ အားအလယ် အလတ်ရှိသော ]]ထာမမဇ္ဈိမ}} ယောကျာ်း မမြှောက်နိုင်လောက်အောင် ကြီးသောစားပွဲခုံကြီး ပေါ် ခဲဖွယ် ဘောဇဉ်တို့ကို တင်၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။ ထမင်း ဟင်း ပါသော ထမင်းအိုးကြီး၊ ဟင်းအိုးကြီးစသည်ကို လူအများ ဝိုင်းမ၍ ကပ်လျှင် အကပ်မမြောက်။
အကပ်ပျက်ခြင်းအင်္ဂါ (၆) ပါးပြင်ဆင်
၄။ ရဟန်းယောကျာ်းအဖြစ်မှ ရဟန်းမိန်းမအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားခြင်း၊
မစားကောင်းသော အသားကြီး ၁၀ မျိုးပြင်ဆင်
လိင်, ဒဏ်သင့်ကြောင်း (၆) ပါးပြင်ဆင်
မအပ်သော ကနုတံ (၆) ချောင်းပြင်ဆင်
ပရိဘောဂ (၄) ပါးပြင်ဆင်
အဖျော်မအပ်သော အသီးကြီး (၉) လုံးပြင်ဆင်
အဖျော် (၈) ပါးပြင်ဆင်
မအပ်သော ဆိုးရည် (၉) မျိုးပြင်ဆင်
ကာလိက (၄) ပါးပြင်ဆင်
သုရာခေါ် သေ (၅) မျိုးပြင်ဆင်
မေရယခေါ် အရက် (၅) မျိုးပြင်ဆင်
ကုလဒူသန (၈) ပါးပြင်ဆင်
အနေသန (၂၁) ပါးပြင်ဆင်
အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား မဟုတ်ပြင်ဆင်
သေခိယ သိက္ခာပုဒ် (၇၅) ပါဠိတော်ပြင်ဆင်
သေခိယ သိက္ခာပုဒ် (၇၅) မြန်မာပြန် အနက်အဓိပ္ပာယ်ပြင်ဆင်
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ သုဓမ္မဝတီရှင်ကျင့်ဝတ်နှင့် ဒုလ္လဘ ရှင်, ရဟန်း မှတ်သားဖွယ် အဓိပ္ပါယ်များ (ဧကာဒသမအကြိမ် ed.)။ တိုက်နံပါတ် − ၅၃၊ ဗိုလ်ရွဲလမ်း၊ ရန်ကုန်မြို့: သုဓမ္မဝတီ စာပုံနှိပ်တိုက်။ အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)CS1 maint: location (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗုဒ္ဓဘာသာရဟန်းများသင်ကြားလေ့ကျင့်ရသောသိက္ခာပုဒ်များ&oldid=640062" မှ ရယူရန်
၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၁၊ ၁၂:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။